Iphrofayli ye-Aluminium "PROVEDAL" yenziwe nge-aluminium alloy 6063. Yembotshwe ngopende, esetshenziswa ngokupuniza ensimini ye-electrostatic. Kulesi simo, upende lubumba, lufake ifilimu elimnyama ngobukhulu bama-micrometer angu-70. Ukugqoka okugcotshiwe kusetshenziselwa ukuthuthukisa izindawo zokuvikela nokunikeza iphrofayili ukubukeka okuhlobisa. Yenzelwe ukwakhiwa kwamafasitela kalula, ashayela noma aguqa kalula. Izici zalo:
- nge-single glazing sound insulation yi-decibel 10-12;
- iklasi ye-airmeability A3;
- iklasi lokuphikisa umoya V2;
Igumbi lokulinganisa amanzi e-E2.
- ukugxila okushisa A1.
Izinketho zokuklama okungenzeka: izindlela ezimbili nezintathu. Uchungechunge oluthi "usebenzise i-C640" lisetshenziselwa ukugaya ama-balconi, amatharasi, ama-verandas. Yenziwe ngezingxenye zehhovisi elikhanyayo.
-sall profile ububanzi be-aluminium, okwandisa indawo yokuhamba kwemisebe yelanga;
- ukumelana okungafani emisebeni ye-ultraviolet;
- kungenzeka ukufaka ingilazi eyodwa esakhiweni;
- Izigaba eziyizithulu nezokuthutha zihlangene;
- inani elingenamkhawulo lamaphiko kuhlaka;
- ukuvikelwa okuhle kakhulu ngokumelene nothuli, umoya, imvula;
- kungenzeka ukugqoka izakhi eziyinkimbinkimbi.
Uchungechunge lwe-C640 ludalwe ngokusebenzisa amasu okuklama okuphambili. Inezici eziphezulu zobuchwepheshe kanye nezinkomba zokuncintisana ezinkulu zokuncintisana. Iphrofayela inezinhlobonhlobo zezici zokuxhuma, futhi lokhu kukuvumela ukuba usebenze kuma-balconi kwanoma yikuphi ukucushwa. Ngesikhathi esifanayo, izakhiwo ezihlangene zibukeka zihle futhi zihambelana.
Ukufaneleka kwamaphrofayli "okubukeka" kufaka phakathi izimfanelo ezifana nokuhlala, amandla aphezulu, ukuphikelela okuqhubekayo ezenzakalweni zomoya, ukubukeka kwesimo sobuhle. Ingilazi esetshenziselwa iphrofayli ye-aluminium ingama-millimitha angu-5 ubukhulu. Lokhu kunganciphisa kakhulu izinga lomsindo wangaphandle. Ingilazi i-pre-polished, eyanciphisa inani lezinhlamvu ezincane. Ukuphosa kwandisa amandla weglasi.
Amafilimu ama-impact ne-toning angasetshenziswa eklasini. Ukufakwa ngaphansi kwe-frame tide kunomthelela ekususweni kwemvula yomoya. Ububanzi be-tide ephansi ngamamitha angu-15. Ukufakwa uphawu kwephrofayli kwenziwa ngokusebenzisa i-foam ekhulayo kanye ne-silicone sealant. I-Windows eyenziwe ngephrofayli ye-aluminium inezinga eliphakeme kakhulu lokuphepha komlilo kunemikhiqizo efanayo eyenziwe nge-PVC. Kwezinye amakamelo, ikakhulukazi ukukhiqizwa, le mfanelo ibaluleke kakhulu.
Isisekelo socingo yisiqinisekiso sokuphila kwesikhathi eside kocingo
Uphahleni lwe-Ceramic (tile)
Ngumuphi ipompi ozosiza ukuhlela ukutholakala kwamanzi kwindlu yezwe emthonjeni?
Tablets "Laura": umthengi ukubuyekezwa kanye nemithetho zomuthi
Ukubhekana ne zamapulangwe
Indlela ukuqaphela izimpawu komzimba okungamahlalakhona?